အခမဲ့များအတွက် H2O အခမဲ့အိုင်ကွန် Pack ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » icon pack » H2O အခမဲ့အိုင်ကွန် Pack ကို
H2O အခမဲ့အိုင်ကွန် Pack ကို APK ကို
H2O အတူရောင်စုံအိုင်ကွန်ဗူးဖြစ်ပါသည် 3600 icon များထက် ပို. ချောမွေ့တဲ့ဒီဇိုင်းနှင့် Samsung, Huawei က EMUI, Motorola တစ်ခုမှာ Plus အားအိုင်ကွန်အစုံကနေကိုယ်ပိုင်အိုင်ကွန်များ၏ rounded shapes.Lots အတူဟိုက်ဒရိုဂျင် OS ကို၏အနည်းဆုံး icon များအားဖြင့်မှုတ်သွင်း။
ထောကျပံ့ launchers (သင် app မှတိုက်ရိုက် icon များလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်):
- ADW Launcher ကို
- Apex Launcher ကို
- CM Theme အင်ဂျင်
- GO Launcher ကို
- ဟိုလိုဖွင့်တင်, HD
- LG ကနေအိမ်
- M ကိုဖွင့်တင်
- Mini ကိုဖွင့်တင်
- Nougat တင်ပေးသူ
- Nova Launcher ကို
- V ကိုဖွင့်တင်
- ZenUI တင်ပေးသူ
- ABC ရုပ်သံတင်ပေးသူ
- Evie တင်ပေးသူ
ထောကျပံ့ launchers (သင် Launcher ရဲ့ setting များကို menu ထဲကအိုင်ကွန် pack ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်):
- Arrow တင်ပေးသူ
- ASAP တင်ပေးသူ
- Cobo တင်ပေးသူ
- mesh တင်ပေးသူ
- peek တင်ပေးသူ
- Z ကိုဖွင့်တင်
- Quixey င့်တင်ပေးနေဖြင့်စတင်ရန်
- iTop တင်ပေးသူ
- MN တင်ပေးသူ
- S ကဖွင့်တင်
18 / 05: ကဆက်ပြောသည် 51 ထက်ပိုပြီးတစ်ဦးစုစုပေါင်း icon များ 3680 icons များ!
Added အသစ်ကအခြားရွေးချယ်စရာ icon များ gmail ကအဘို့, မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အချို့သော apps တွေအတွက်မြို့ပတ်ရထား icon များ (beta ကို) addedd ။
*** ယောက်ျားများကျွန်မရဲ့စာတိုက်ပုံးထဲမှာ 1300 အိုင်ကွန်တောင်းဆိုမှုများထက်ပိုပါတယ်, ငါသည်ထိုသူအပေါင်းတို့ကို process ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါအချိန်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ကျေးဇူးပြုပြီး🙂
29.58 ကို MB